Cybercafé : manavao fiaraha-miasa ny Orange sy ny Acybimad | NewsMada
Cybercafé : manavao fiaraha-miasa ny Orange sy ny Acybimad
Manohana hatrany ny fikambanan’ireo mampiasa cybercafé (Acybimad) ny Orange, manome vahaolana ho azy ireo amin’ny tolotra vaovao hahitan’izy ireo tombontsoa bebe kokoa amin’ny asa atao. Anisan’izany tolotra vaovao izany ny saran’ny fifandraisana amin’ny tambajotra finday, karazany maro azo isafidianana, izay ahitana tombontsoa ny fampiasana azy. Vita sonia, omaly, ny fifanarahana eo amin’ny Orange, nataon’ny tale jeneraly, Michel Degland, sy ny filohan’ny Acybimad, Rakotonirina Rija. Dimy taona izao ny fiaraha-miasa eo amin’ny roa tonta.
« Mitovy ny fomba fijerinay, manome fahafaham-po ho an’ireo mpanjifa mampiasa internet. Manana anjara andraikitra lehibe rahateo ny Acybimad ho an’ny fampandrosoana ny toekarena eto Madagasikara, koa faly manampy amin’izany sehatra izany, indrindra izao efa miditra amin’ny tambajotra haingam-pandeha 4G », hoy i Michel Degland. Manana anjara toerana lehibe amin’izay toekarena izay rahateo ny Orange.
“Tsy ny cybercafé ihany akory ny Acybimad fa eo indrindra koa ireo mpampiasa azy. Tsy vao omaly ny fiarahanay amin’ny Orange , ka mbola faly izahay manavao izany », hoy Rakotonirina Rija. Matanjaka ny fiaraha-miasa eo amin’ny Orange sy io fikambanana io.